Izindaba - Iteyipu yokusakaza yakhiwa izingqimba eziningi ze-fiberglass ekhethekile efakwe i-resin.
1.Ubulukhuni obuphakeme nesisindo esilula: Ubulukhuni bensimbi ngemuva kokuphulukiswa izikhathi ezingama-20 zokhonkolo wendabuko. Lesi sici siqinisekisa ukulungiswa okuzinzile nokuqinile ngemuva kokusetha kabusha okulungile. Izinto zokulungisa zincane futhi isisindo silula, silingana no-1/5 wesisindo sokhonkolo kanye no-1/3 wobukhulu obungenza indawo ethintekile ithwale isisindo esincane, inciphise umthwalo ekusebenzeni okusebenzayo ngemuva kokulungiswa, lula ukujikeleza kwegazi nokukhuthaza ukwelashwa.
2. Ukungena komoya okuhle nokuhle: Ibhandeshi lisebenzisa intambo eluhlaza esezingeni eliphakeme nobuchwepheshe obukhethekile bokuluka imesh obunomoya omuhle.
3.Isivinini sokuqinisa ngokushesha: Inqubo yokuqina yebhandeshi iyashesha. Iqala ukuqina imizuzu engu-3-5 ngemuva kokuvula iphakethe futhi ingathwala isisindo ngemizuzu engama-20 ngenkathi ibhandishi le-plaster lithatha cishe amahora angama-24 ukuqina ngokuphelele futhi lithwale isisindo.
4. Ukudluliswa okuhle kwe-X-ray: Ibhandeshi linamandla amakhulu emisebe futhi umphumela we-X-ray ucacile osiza udokotela ukuthi aqonde ukuphulukiswa kwethambo elithintekile nganoma yisiphi isikhathi phakathi nenqubo yokwelashwa.
5.Ukumelana namanzi okuhle: Ngemuva kokuthi ibhandishi selenziwe lukhuni, ubuso bushelelezi futhi izinga lokumunca umswakama liphansi ngama-85% kunokhonkolo. Noma isitho esithintekile sichayeke emanzini, singaqinisekisa ukuthi indawo ethintekile yomile.
6. Easy ukusebenza, nezimo, plasticity ezinhle
7.Induduzo nokuphepha: A. Kodokotela, (isigaba esithambile sinokuguquguquka okungcono) lesi sici sikwenza kube lula futhi kube usizo kodokotela ukuba basisebenzise. B. Esigulini, ibhandishi linokusikwa okuncane futhi ngeke likhiqize izimpawu ezingathandeki zokuqina kwesikhumba nokunwaya ngemuva kokuba ibhandishi le-plaster lisomile.
8.Izicelo ezahlukahlukene: i-orthopedic fixation yangaphandle, i-orthopedics ye-orthopedics, izinto ezisizayo ezisebenzayo zamalungu okufakelwa namathuluzi wokusekela. Indawo yokuvikela yendawo emnyangweni wokusha.